मेरो बुबाले ४२ वटी श्रीमती विहे गर्नुभयो म ४१ औँ आमाको छोरा हुँः जय किसन बस्नेत « News of Nepal
बाल्यकालदेखी नै कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेका निकै चर्चित निर्माता, निर्देशक एवम् नायक जसले अहिले सम्म १०७ वटा फिल्ममा काम गरिसकेका छन्, जसको बुबाले ४२ वटी श्रीमति विहे गरेका थिए र जो ४१ औँ आमाका छोरा हुन् जय किसन बस्नेतसंग प्रदिप विवश भण्डारीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप
कहाँ जन्मनु भयो र बाल्यकाल कस्तो थियो ?
मेरो जन्म २०३८ साल असोज १७ गते काठमाडौँ, सिनामंगलमा भएको हो । मरो बाल्यकाल त्यस्तो नरमाईलो भने भएन । म सानै देखी चन्चले थिए । मैले सानै देखी मेरो दाई सोवित वस्नेत मार्फत यो फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाए । म आफूलाई भाग्यशाली ठान्छु । विशेष त मेरो बाल्यकाल मनोरञ्जन मै बित्यो ।
अस्ति असोज ५ गते बाट मेरो धुम ३ चलचित्र प्रदर्शनमा आएको छ । त्यसैको लागि विभिन्न हलहरुमा जाने दर्शकहरुको प्रतिकृया बुझ्ने । केहि सल्लाह सुझाव लिने यसैमा व्यस्त छु ।
धुम ३ चलचित्रले कस्तो व्यापार गरिरहेको छ ?
एकदमै पनि राम्रो व्यापार गरेको छ । धेरै दर्शकहरुले मन पराईदिनु भएको छ । धुम चलचित्रलाई पनि एकदमै मन पराईदिभएको थियो त्यहि भएर मलाई धेरै दर्शकहरुले यसको धुम २ बनाउन आग्रह गर्नु भयो र मैले धुम २ पनि बनाए त्यसले पनि मलाई राम्रै प्रतिक्रिया मिल्यो । अहिले यो धुम ३ बनाए यस चलचित्रले पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । यहि मैले पाएको दर्शकहरुको मायाले अवस्य पनि अव धुम ४ पनि बनाउने प्रयत्न गर्नेछु ।
कसरी यस क्षेत्रमा बाल्यकाल देखी नै रहिरहन सफल हुनुभएको छ ?
मलाई मेरो देश प्योरो लाग्छ । त्यसैमा झन मलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई छाडेर कहि कतै जान मन लाग्दैन । हुन त म पनि विदेश गएर बस्न सक्थे तर मैले यसरी दर्शकहरुको माया पाएको छु कि मलाई यहि नेपालमा नै स्वर्ग छ त म विदेश गएर किन ओझलेमा पर्नु भन्ने लाग्छ । त्यसैले मलाई जब सम्म दर्शकहरुले माया गरिरहनु हुन्छ तब सम्म मैले नेपाली चलचित्र क्षेत्र छाडेर कहि जाने छैन भन्न चाहान्छु ।
यस क्षेत्रमा आउन चाहाने साथिहरुका लागि के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त हरेक क्षेत्रमा जानु भन्दा पहिले त्यस क्षेत्रको बारेमा राम्रोसंग बुझ्नु पर्छ । यस चलचित्र क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिले पछिल्लो समय निकै धेरै कलाकारहरु आउनु भएको छ कतिले त धेरै राम्रो पनि गर्नु भएको छ । तर कति साथिहरु आउनुभएको छ अनि नबुझेर आएकै कारण ओझेलमा पर्नु भएको छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा टिकेर रहिरहन निकै गाह्रो छ । त्यसैले पहिले आफू सक्षम हुनुहोस यस क्षेत्रको लागि अनि मात्र प्रवेश गर्नुहोस भन्न चाहान्छु ।
अन्तिममा केहि भन्न मन छ कि ?
मेरो चलचित्र धुम ३ अस्ति असोज ५ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आएको छ । आफ्नो नजिक पर्ने हलमा गएर हेरिदिनुहोला । यो चलचित्र डिसहोम च्यानल नम्बर १०८ मा पनि प्रदर्शन भैईरहेको छ । तपाईले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । आजसम्म मलाई यति धेरै माया गरिहनुभएको छ त्यसको लागि सम्पूर्ण नेपाली आमाबुबा, दाजुभाई, दिदिबहिनीलाई धेरै–धेरै धन्यवाद भन्न चाहान्छु र आँउदा दिनमा पनि यसै गरी तपाईको माया, साथ, सहयोग सधैभ्ीर पाईरहनेछु भन्ने पनि आशा गरेको छु । जय धुम ३
अब फिल्मको पनि बीमा
फिल्ममा माया बस्छ कि के हो
दशैंलाई रातो टीका बनाइँदै